Xilligii Aftida loo qaadi lahaa Dastuurka Puntland oo soo dhowaadey iyo xulistii Ergooyinka oo sheki dhalisay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Xilligii Aftida loo qaadi lahaa Dastuurka Puntland oo soo dhowaadey iyo xulistii Ergooyinka oo sheki dhalisay
Xilligii Aftida loo qaadi lahaa Dastuurka Puntland oo soo dhowaadey iyo xulistii Ergooyinka oo sheki dhalisay
Iyadoo ay 3-beri ka harsan yihiin xiligii la shaaciyey in aftida loo qaadayo dastuurka cusub ee Puntland ayaa waxaa magaalada Garoowe kusii qul qulaya ergooyinkii dhowaanta loosoo xulay si ay Dastuurka ugu codeeyaan.
Ergooyinkaas oo ay xulistoodu muddo dhowr todobaad ah qaadatay ayaa intoodii badnayd gaarey Garoowe, waxaana socota qaban qaabo xoogan oo ay guddiga doorashooyinku ugu jiraan sidii aftida Dastuurku loo qaadi lahaa.
Maalinta loo balamay in Dastuurka loo codeeyo ayaa ah 15-ka bishan aynu ku jirno ee April, waxayna dadku si aad ah u hadal hayaan qaabka ay u dhici doonto aftidu iyo tallaabada xigta ee ay guddiga doorashooyinku qaadi doonaan.
Dhinaca kale waxaa isa soo taraya cabashooyinka arintaas la xiriira ee ka imaanaya bulshada, cabashooyinkaas oo ah kuwo salka ku haya dhowr arimood ayaa waxaa kamid ah in ergeda Dastuurka ansixintiisa loo xilsaaray ay yihiin kuwa aan si siman qabaa’ilka loogu qaybin.
Waxa kale oo jira qaybo badan oo bulshada kamid ah oo iyagu si cad uga horyimid hanaanka ay dowladda madaxweyne Faroole shaacisay in Dastuurku lagu ansixinayo oo isagu ah mid kooban islamarkaana ay ka qayb gelayaan ergooyin ay tiradoodu dhan tahay 480-qof.
Ergooyinkan oo 100-kamid ah laga soo xulay shaqaalaha dowladda ayaa waxaa qabaa’ilka ka biya diidey ay u badan yihiin kuwa dega gobolka Bari inkastoo ay guddiga doorashooyinkuna tilmaameen in cabashadaasi tahay mid aan jirin.
Bishii March ee lasoo dhaafay 11-keedii ayey ahayd markii ay guddiga KMG ah ee doorashooyinka Puntland shaaca ka qaadeen in 15-April afti loo qaadi doono Dastuurka cusub ee Puntland.
Qodobka sida aadka ah isha loogu hayo ee uu Dastuurkan cusubi kaga duwan yahay xeerkii horay Puntland loogu dhiqi jirey ayaa ah in madaxweynuhu uu muddo 5-sano ah xilka hayn doono.